Wax ka ogow dilaaga daahsoon ee caalamka - BBC News Somali
Sigaarka ayaa dila kala bar dadka isticmaala, sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka aduunka ee (WHO). Sannad walba waxaa sigaarka u dhinta lix milyan oo qof halka ku dhawaad 900,000 oo ah dadka aan sigaarka cabbin ay u dhintaan qiiqa kaga yimaadda dadka meelaha u dhaw ku cabba.
Iyadoo ay jirto arrinta ayaa haddana qarniyo badan cabbidda sigaarka waxaa loo arkaa mid caafimaad ah, waxaana beeridda tubaakada loogu yeeraa "dhirtii barakeysnayd " qarnigii 16-aad.
"Cabbidda badan ee sigaarka ayaa ah sunta looga hortagi karo cuduro badan oo ay suuragal tahay in ay qofka ku dhacaan," waxa uu sidaasi ku qoray buug uu qoray 1587 oo uu uga hadlayay Sigaarka.
Lahaanshaha sawirka Wellcome Collection
Khubarada darsi jirka bina'aadamka ayaa lagu buurin jiray in si xor ah ay u cabbaan sigaarka si aysan u urin maydka ayna isaga ilaaliyaan cudurada.
Balse khubarada arrintani iskuma raacsana, oo waxaa jiray qaar su'aal galiyay in tubaankadu ay dawo u tahay cudurada.
Khabiirkii u dhashay dalka UK John Cotta, oo ahaa ninkii qoray buugaagtii 1612 ayaa sheegay in sigaarku yahay midka keena "cuduro badan".
Tobankii ruux ee adduunka ku dhimata mid ka mid ah ayaa sigaar eersaday
Waxaa sidoo kale cabbidda sigaarka lagula talinyaya fanaaniinta "si uu codka ugu furo marka ay heesayaan".
Dalka UK waxaa la adegsaday Boombala lagu magacaabo 'Smokey Sue' kaas oo loo isticmaalay in haweenka uurka leh looga digo khatarta cabbidda sigaarka ay ku yeelan karto ilmaha ay uurka ku sidaan.
Lahaanshaha sawirka Science Museum London
Hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegtay in Sigaarka uu ka mid yahay "khatarta caafimad ee ugu wayn ee ebed soo foodsaarta caalamka ".
Hay'adda ayaa ugu baaqday dalalka in ay meelmariyaan sharciyo looga hortagayo isticmaalka sigaarka iyagoo xaddidaya shirkadaha xayiisiiya sigaarka islamarkana kordhinaya Canshuurta sigaarka.
Hay'adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegtay in isticmaalka Sigaarka uu hoos u dhacay boqolkiiba 20% guud ahaan caalamka 2016, marka la barbardhigo sannadkii 2000 oo ay tirada hos u dhacday boqolkiiba 27%.
Maqal Waa maxay saameynta caafimaad ee ka dhalata cabida tubaakada?